CIIDUL-ADXA: ALLABARIGII IBRAAHIM - Welcome to Somali Believers Fellowship
Video shared by	Abdi Duale on	 Monday, 29 September 2014 in Barashada Baybalka (Bible Study)
Waxaynu is weydiin karnaa, haddaba, muxuu Ibraahim u rumeeyey Ilaahay? Rumaysigiisu ma sidii 'Inshaa-alaah' oo kaluu ahaa? "Haddii Ilaahay yidhaahdo waxba kama qabo, hadduusan odhana waxba kama qabo?". Maya, Ibraahim aad buu Ilaahay ugu dhowaa oo u aaminsanaa. Isagu Rabbiga ayuu rumaystay oo Ilaahna taas wuxuu ugu tiriyey xaqnimo. (Bilowgii 15:6) Rumaysigiisu muu ahayn mid shaki ku jiro, waayo wuxuu ogaa in, "Eray kasta oo Ilaah daahir yahay" (Maahmaahyadii 30:5), oo uu isagu awoodo inuu sameeyo wixii uu ballanqaaday. Wuxuu ogaa inuu Ilaahay laftiisu arrintan soo faragelindooney, si mucjiso leh, oo ay u dhici doontay sidii uu Isagu ballanqaaday.
Haddaba, xaggee ayuu Ismaaciil dhacdooyinka ka soo geleyaa?
Mar dambe ayaa waxaa dhashay Isxaaq iyada oo uu Ibraahim 100 sanno jiro. Sidoo kale Quraankuna wuxuu marka hore ka hadlayaa Ibraahim, dabadeedna in Ismaaciil iyo Isxaaq ay isaga u dhasheen. In iyaga waxyi la siiyey, dabaadeedna waxyi la siiyey Muuse, kaddibna Ciise. Suuratul al Baqra 136) Laakiinse waxyiga uu Quraanku ka hadlayaa waa Islaamka.
Markii uu Isxaaq koray, Ismaaciil ayaa ka masayray barakooyinkii Isxaaq loogu ballanqaaday (Bilowgii 21:9). Isaga ayaa barakooyinkaas isla doonayey. Ilaahay ayaana hore Ibraahim ugaga digey inay tani dhici doonto (Bilowgii 21:10), oo wuxuu Ibraahim u sheegay inuu isaga iska diro. Ibraahim wuxuu markaa ku noolaa dhulka Falastiiniyiinta ilaa uu Isxaaq ka qaangaadhayey. Haddana, wuxuu rajeynayey inay riyadiisii rumowdo.
Ku amarkii Allabariga
Ma Ismaacii buu ahaa mise Isxaaq kii la amray allabari loo bixiyo? Kee buu Ilaahay ballanqaadyada siiyey? "Markaasuu ku yidhi, Hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah, kan aad jeceshahay, oo ah Isxaaq, oo u kac dalka Moriyaah; oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dul bixi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono" (Bilowgii 22:2). Ismaaciil markaa lama joogin Ibraahim qoyskiisa, ee Isxaaq oo keliya ayaa joogey. Quraanka lafiisuna allabarigan wuu ka hadlayaa; "Oo markii wiilkii koray inuu Ibraahim la hadli karo, wuxuu nebi Ibraahim isaga ku yidhi, Wiilkaygiiyow waxaan ku arkay hurdada anoo ku gawrici ..." (Suurat As Saaffaat 100-102). In kasta oo uusan Quraanku macaga Isxaaq halkan ku sheegeyn, haddana waa inuu kani Isxaaq noqdaa, waayo isagu waa wiilka keliya oo Quraanku sheegayo in Ibraahim loogu ballanqaaday, ee la barakeeyey, "Waxaanu ugu bishaareyney Isxaaq, Nabi suuban, waana barakaynay Ibraahim iyo Isxaaqba " (Suurat As Saaffaat 112, 113). Barakadan iyo ballanqaadkan marna Ismaaciil lama siin.
Tani miyaanay Injiilka kuu geyneyn? Ibraahim wuxuu arkay Injiilka Masiixiyiinta oo kaami ah. Ilaahay ayaa noloshii Ibraahim u isticaamalay sidii tusaale ama hordhac ama waxyi: inuu Isagu (Ilaahay) adduunka u soo diri dooney Wiilkiisa Ciise Masiix, kaas oo ka dhalan dooney farcankii Ibraahim, si barakadii uu quruumaha oo dhan ugu ballanqaaday dhab ahaantii u dhacdo, oo uga dhacdo dhimashadiisii uu allabari ahaanta iskutallaabta ugu dhintay si uu dadka oo dhan badbaado ugu noqdo, oo dhimashadii uga sarakaco Isaga oo maanta Ilaah la jooga oo la leh amaantii uu weligiis Isaga la lahaa.
Waa Inaan Fiiro Gaar ah u Yeelanaa:
" Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3:16). "Oo taas jacayl baa ku jira, mana aha inaynu Ilaah jeclayn, laakiinse isagaa ina jeclaaday, oo wuxuu Wiilkiisa u soo diray si uu kafaaraggudka dembiyadeenna u noqdo" (I Yooxanaa 4:10).